Hogaamiye Farmaajo oo safar aan lasii shaacin ku tagay - Axadle | Wararka Africa
Hogaamiyaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa safar aan horay loosii shaacin ku tagay Magaalada Nairobi Caasimadda dalka Kenya, waxaana ku wehliyay mas’uuliyiin kala duwan.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa baahisay Hogaamiyaha oo booqanaya dhismaha Safaaradda Soomaalida ee Nairobi, waxaana uu ku baaqay in gacan laga geysto dib u dhiska guud lagu sameynayo safaaraddaas.
Muddo 9-bilood ah ayuu dalbaday in dib loo hagaajiyo si loosoo celiyo bilicda ay leedahay safaaradda Soomaaliya ee Nairobi oo ah dhismaha ugu weyn ee safaarad ahaan loosiiyo Soomaaliya.
“Safaaraddeena waxa ay ku taallaa meel fiican oo muhiim ah, waa safaaradda ugu weyn ee aan dunida ku leenahay, waana meelaha la iska fiiriyo oo la iska qiimeeyo, sidaas awgeed waa in aan ka qaybgalkaa dib u dhiskeeda, maadaama dhaxal naga wada harayo ay tahay” Sidaasi waxaa yiri Hogaamiye Farmaajo.
Hogaamiyaha Soomaaliya ayaa sheegay in dhibaatooyin kala duwan dalka uu soo maray, sidaas awgeed haatan laga qaybgalo dib u dhiska & kasoo kabashada dib u dhaca dalka ku yimid muddadii burburka & dagaalka sokeeye.
“Waxa ay Safaaraddu u baahan tahay in dib loosoo celiyo bilicdii ay lahayd, dadkii naga horeeyay ayaa dhisay, waa in aan hagaajinaa si dhaxal wanaagsan aan uga tagno jiilka naga dambeeya, qof waliba waa in uu soo celiyaa waddaniyadda aan lahayn si dib udhiska meelaha muhiimka ah mas’uuliyad la isaga saaro” ayuu sii raaciyay Hogaamiye Farmaajo.
Baraha Bulshada waxaa aad looga hadal hayaa safarka aan horay loosii shaacin ee Hogaamiyaha Soomaaliya uu ku tagay Magaalada Nairobi, maadaama lasii baahin jiray dalalka uu tagayo Hogaamiye Farmaajo.
Xiriirka Soomaaliya & Kenya ma wanaagsano, waxaana yaraaday socdaalka Hogaamiyayaasha DFS ee dhanka Nairobi, sidoo kale Hogaamiyaha Kenya kama mid ahan Isbaheysiga gaarka ah ay ku mideysan yihiin Soomaaliya, Itoobiya & Eretareeya, waana tan keentay in cilaaqaadka uu sii fogaado.